''ကိုယ် Interpret ပြန်လုပ်နိုင်တဲ့ သီချင်းမျိုးကိုသာ ပြန်ဆိုတာဖြစ်တာကြောင့် ဖြူဖြူက ပြန်ဆိုတေးဆိ? - Yangon Media Group
”ကိုယ် Interpret ပြန်လုပ်နိုင်တဲ့ သီချင်းမျိုးကိုသာ ပြန်ဆိုတာဖြစ်တာကြောင့် ဖြူဖြူက ပြန်ဆိုတေးဆိ?
ပြန်ဆိုတေးတစ်ပုဒ်ကို သီဆိုမယ်ဆိုရင် အချက်သုံးချက်နဲ့ကိုက်ညီမှ ပြန်လည်သီဆိုဖြစ်ပါတယ်လို့ အဆိုတော် ဖြူဖြူကျော်သိန်းက ပြောပါတယ်။ ”ဖြူဖြူပြန်ဆိုတေးတွေ ပြန်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာ ဘယ်လိုရွေးချယ်ခံစားပြီး သီဆိုဖြစ်လဲဆိုတာကို ပရိသတ်တွေလည်းသိချင်ကြမှာပါ။ အဓိကကတော့ သီချင်းကိုရေးသားတဲ့ အနုပညာမူပိုင်ခွင့်ကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ တေးရေးဆီကနေပြီး တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ယူထားတဲ့ သီချင်းတွေ ဖြစ်ရမယ်။ နောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းတွေကိုလာပြတဲ့ အချိန်မှာကိုယ်က သီချင်းတွေကို Interpret ပြန်လုပ်လို့ရတဲ့ သီချင်းတွေကိုပဲရွေးတယ်။ သီချင်းရေးဆရာ၊ နောက်မူရင်းအဆိုရှင်တေးသီချင်း အဲဒါတွေကို ရိုသေသမှုနဲ့ ဆိုပါတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
တကယ်လို့သီချင်းကို ကိုယ်က Interpret ပြန်လုပ်လို့မရတဲ့ သီချင်းတွေဆိုရင် ဘယ်တော့မှမဆိုပါ ဘူးလို့လည်း ဖြူဖြူကျော်သိန်းက ပြောပါတယ်။ ”ပြောရရင် ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်နဲ့ငွေရှာတာလည်း ဖြစ်တယ်။ ဆိုဖို့လက်ခံလိုက်ရင် ငွေရတာတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ငွေရတိုင်းလည်း မဆိုပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် သနားစိတ်မရှိဘူး ကြီးကျယ် တယ်လို့ထင်တယ်။ တချို့ကလည်းသူတို့သီချင်းတွေကို မရွေးချယ်လို့အခုထိ မကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိကြတယ်။ ဖြူဖြူကတော့ Professional ကျင့်ဝတ်တစ်ခုကို စောင့်ထိန်းပါတယ်။ ဖြူဖြူက ပြန်ဆိုတေးတွေ ဆိုကြတဲ့အချိန်မှာ အဆိုတော်တစ်ယောက်စဖြစ်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄နှစ်လောက်ကဆို တော်တော်ကိုပြန် ဆိုတေးတွေ များပါတယ်။ ကိုယ် Interpret ပြန်လုပ်နိုင်တဲ့ သီချင်းမျိုးကိုသာ ပြန်ဆိုတာဖြစ်တာကြောင့် ဖြူဖြူက ပြန်ဆိုတေးတွေဆိုတဲ့ အဆိုတော်တွေထဲမှာ အနည်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်” လို့ဆိုပါတယ်။ ဖြူဖြူကျော်သိန်းဟာသီဆိုထားတဲ့ ပြန်ဆိုတေးအချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိမှာ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရသူဖြစ်ပါတယ်။
”ဖြူဖြူက လက်တွေ့ကျကျစဉ်းစားတယ်။ ဝေဖန်တယ်ဆိုတာထက် ကိုယ့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကခံစားချက် တွေကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဝေဖန်တယ်ဆိုတာက အချက်အလက်တစ်ခုအပေါ်ကို မူတည်ပါတယ်။ ဥပမာ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဝေဖန် တော့မယ်ဆိုရင် အချက်အလက်အပေါ်မူတည်ပြီး ဝေဖန်မယ်ဆိုရင် သီဆိုတဲ့အဆိုတော်ကဆိုတဲ့ နည်းစနစ်မှန်၊ မမှန်ကိုကြည့်တယ်။ တကယ်လို့ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေက တီးမယ် ဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ ဝေဖန်ဖို့အဆင်မပြေပါဘူး။ နောက်သီချင်းတစ်ပုဒ်တည်းကိုပဲ အဆိုတော် ၁ဝ ယောက်ကို ဆိုခိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် သူတို့တစ်ဦး ချင်းစီရဲ့ Interpretion က တစ်ယောက်နဲ့ တစ် ယောက်မတူတဲ့အတွက် ၁ဝ ယောက်ဆိုရင် ၁ဝ မျိုးဖြစ်နေမယ်။ အဲဒါကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင် နားလည်ခြင်း၊ နားမ လည်ခြင်းအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ အဲဒါကို ဝေဖန်တာကတော့ ဝေဖန်တာ မဟုတ်တော့ဘဲ Interpretion အပေါ်မှာ ကိုယ်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ထုတ်ဖော်တာဖြစ်တယ်။ လူတွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူဘူး။ ကိုယ်မကြိုက်တာကို သူငယ်ချင်းကကြိုက်မယ်။ သူမကြိုက်တာကိုလည်း ကိုယ်ကကြိုက်နေမယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ်မကြိုက်တာတွေကို ထုတ်ဖော်မယ်ဆိုရင် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးထုတ်ဖော်မယ်ဆိုရင် အားလုံးသာယာလှပနေမှာပါ” လို့ ဆက်လက်ပြောခဲ့ပါတယ်။
''ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အာရုံခံစားမှုက မှားတာလုပ်မိရင် လိပ်ပြာ မလုံတာမျိုး ကျွန်တော့်မှာ ပ
ဆူပါဘောင်းတွင် တင်ဘာဘလိတ်နှင့် အတူ ဖျော်ဖြေမည်မဟုတ်ဟု ဂျက်ဆင်ငြင်း ဆို
ဗန်းမော်-နဘား ဓာတ်အားလိုင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် နစ်နာခဲ့ရသည့် တောင်သူများအတွက် နစ်နာကြေးငွေကျ
အမေများအဖွဲ့မှ ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် ဒေါ်မိုးသီတာမိုး လူကြီးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန??
ထိုင်း အဖမ်းအဆီးများကြောင့် နေရပ်ပြန်လာသူများပြား ယခုလအတွင်း မြဝတီသို့ ပြန်လာသူ တစ်ထောင်ေ
လေယာဉ်မယ်လေးနှင့် တွဲနေသော မီလင်းဆိုမန်